Rita, Writing for My Sake!: Chicken Politic
သူငယ်ချင်း forward ထားတဲ့ email ပါ။
လီရှင်လွန်း နေရာလဲ ရောက်ရော မပြုံးဘဲကို ရယ်မိတော့တာပါပဲ။
ဒီ Sunday မှာ ခြေဆန့်ထားမိတော့ နက်ဖန်ကိုပဲ ez link card ကို top up လုပ်ရဦးမယ်။
Posted by Rita at 2/02/2010 11:19:00 AM
OMG i can't believe my crossing road bring this much troubles to human being...................!!!!!!!!!!!!!!!!!
actually i am justachicken running for my life instead of becomingameat inabum
(Chicken run) cartoon...200xxx............
ဒီ fwd mail ကိုယ်မရဖူးဘူး။ ဖတ်ပြီး ပြုံးလိုက်ရတာ။ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး ရီတာ။ :)
ဖိုးသူတော် တစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ "ကျွတ်" "မုန်း" "၀င်" ပုံပြင်ကို ပြေးသတိရမိသေးတော့၏။
ရွှေအဆင်း နေပွင့်တဲ့ အရပ်ဒေသ (၁)
သတင်းပြောသူများ နဲ့ တန်ဖိုးထားမှု ပြဿနာ
မြတ် နဲ့ Hip Hop !